Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Israely | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Azerbaijaney Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Yorobà
Topy Maso An’i Israely
Efa nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Israely nanomboka tamin’ny 1920. Tsy voasakantsakana izy ireo rehefa mitory sy mivory hoatran’ny fanaon’ny Vavolombelona eran-tany. Nisy fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah nosoratan’ny fanjakana ho ara-dalàna tamin’ny 1963 sy 2000. Nandefa fangatahana tany amin’ny fanjakana ny Vavolombelona tamin’ny 2000 sy 2014, mba hekeny ho ara-dalàna ny fivavahany. Mbola tsy nahazo valiny anefa izy ireo hatreto.
Mamela ny fivavahana rehetra hiresaka momba ny zavatra inoany amin’ny olona ny lalàna any Israely. Manohitra ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah anefa ny Jiosy ortodoksa mafana fo. Manenjika sy mampiasa herisetra amin’ny Vavolombelona, ohatra, izy ireo.
Vitan’ireo Jiosy ortodoksa ireo mihitsy aza indraindray ny nandresy lahatra ny manam-pahefana sasany mba tsy hamela ny Vavolombelona hanao fivoriambe, na dia zon’izy ireo aza izany. Nisy toerana efa nahazoan’ny Vavolombelona alalana hanaovana fivoriambe, nefa nosakanan’ny ben’ny tanàna izy ireo. Voatery nitory tany amin’ny fitsarana àry izy ireo tamin’izay. Nilaza ny Fitsaram-paritra any Haïfa (tamin’ny 2007) sy ny Fitsarana Tampony (tamin’ny 2015) fa navakavahan’ny ben’ny tanàna ny fivavahan’ny Vavolombelona. Nilaza koa ireo fitsarana ireo fa tokony hohajaina ny zon’ny Vavolombelona hanao fivoriambe, fa tsy tokony hohelingelenina izy ireo. Mbola avakavahana ihany anefa ny Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izao.